Gentle Peeling Treatment
BECUPIDON - Gentle Peeling Treatment
#BECUPIDON - Gentle Peeling Treatment
အခြားသော peeling gel နှင့် scrub cream များနှင့်မတူပဲ ရေဓာတ်ကိုအဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်ထားပြီးအသားကိုထိခိုက်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ပွတ်တိုက်သော်လည်း အသားမနာကျင်စေပါ။ Peeling treatment ကို တစ်ပတ်နှစ်ခါသုံးပါ။ မျက်နှာရော ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုပါ ဖြန်းနိုင်ပါသည်။ အသားေါ်တင်၍အသာအယာနနိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆဲလ်သေများနျကိုဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်များကိုပွင့်စေပါသည်။ ကလေးအသားအရေကဲ့သို့နူးညံ့ပြီးလင်းလက်တောက်ပစေပါသည်။
- အညင်သာဆုံး exfoliator
- ရေဓာတ်အခြေခံ ဖော်မြူလာ
- ဆဲလ်သေများနှင့် ချေးများကို ၈ စက္ကန့်အတွင်းဖယ်ရှားပေးသည်။
အသုံးပြုပုံအဆင့် ၃ ဆင့်
တစ်ပတ်ကို ၁ ကြိမ်မှ ၂ကြိမ်သုံးပါ။ ချေးချွတ်လိုသောနေရာပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ဖြန်းပြီး စက်ဝိုင်းပုံပွတ်တိုက်ပြီး အသားဆဲလ်အဟာင်းများ ချေးများကို ချွေးပေါက်များအတွင်းမှဖယ်ရှားပေးသည်။ အသုံးပြုပြီးပါက ကလေးအသားလေးကဲ့သို ဖြူစင့် နူးညံ့ပြီးချောမွတ်စေပါသည်။
- ၂၀၀ml ပါဝင်ပါသည်
- ထုတ်ပြီးနေ့မှ ၃နှစ်အတွင်းသုံးနိုင်ပါသည်.
- အသုံးပြုစဉ်အသားများရဲခြင်း ယောင်ခြင်းဖြစ်လာပါက သုံးခြင်းကိုရပ်ပြီး ဆရာဝန်ထံသွားပါ။
Different from peeling gel or scrub cream, this water-based formula reduces the stimulus feeling to the lowest level. No hurts on skin when scrubbing. Use peeling treatment once or twiceaweek. Spray it on face or body. Gently massage your skin to sweep away dead skin cells and completely clean pores. Get an infant-like glow.
- Most Gentle Exfoliator
- Removes Dead Skin in 8 Seconds
■ Expiration Date : Expires in3years.
■ Storage: Keep the product in cool and shadowy places.
■ Note: Stop using the product when your skin gets red, swollen, or stimulative. Seek advice from doctors.
■ Country of origin: Taiwan / Brand Country: Taiwan
Product Code: XIZ1-COS-01-001(0904)